“ကျမတို့ပြောထားတဲ့ ကတိတွေလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ဖို့ ကျမတို့PPPကိုမဲပေးကြပါ” – Voice of Myanmar
“ကျမတို့ပြောထားတဲ့ ကတိတွေလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ဖို့ ကျမတို့PPPကိုမဲပေးကြပါ”
ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီအနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေစီစစ်ပြီးရွေးချယ်တာလဲ? PPP ပါတီဟာ အင်အားကြီးပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက်နဲ့ယှဉ်ရင် ၅ ပုံတစ်ပုံလောက်သာရှိတာကြောင့် ဘယ်လိုအင်အားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှာလဲ? လူထုဘဝအဓိကဆိုတော့ ပါတီက ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒ ၆၈ ချက်နဲ့အညီဘယ်လိုတွေ ဆောင်ရွက်ပေးမှာလဲ ? ဆိုတာတွေကို သူ့ရှေ့ဆောင်(PPP) ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင် နဲ့ VOM အယ်ဒီတာချုပ် ဦးနေလင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
#VOM #VoiceofMyanmar #PPP #ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ #ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်
“က်မတို႔ေျပာထားတဲ့ ကတိေတြလုပ္ႏိုင္မလုပ္ႏိုင္ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္ဖို႔ က်မတို႔ကိုမဲေပးၾကပါ”
ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီအေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြစီစစ္ၿပီးေ႐ြးခ်ယ္တာလဲ? PPP ပါတီဟာ အင္အားႀကီးပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္နဲ႔ယွဥ္ရင္ ၅ ပုံတစ္ပုံေလာက္သာရွိတာေၾကာင့္ ဘယ္လိုအင္အားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာလဲ? လူထုဘဝအဓိကဆိုေတာ့ ပါတီက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒ ၆၈ ခ်က္နဲ႔အညီဘယ္လိုေတြ ေဆာင္႐ြက္ေပးမွာလဲ ? ဆိုတာေတြကို သူ႔ေရွ႕ေဆာင္(PPP) ပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ နဲ႔ VOM အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေနလင္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။
#VOM #VoiceofMyanmar #PPP #ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ #ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္
Election, Interview, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက်, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို, ပါတီမိတ်ဆက်, အင်တာဗျူး